Caddow: "Ma jirto sabab uu Col. Cabdullaahi Muqdisho ku diido”
Buluugleey Luly, 10, 2005
Mudane Cabdullaahi Axmed Caddow oo kamid ahaa siyaasiyiintii ka qeyb gashay shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee lagu doortay Dowladda KMG ayaa si weyn uga digay in dagaal lagu xaliyo khilaafka u dhaxeeya qeybaha kala aragtida duwan ee ka tirsan Dowladda Ku Meel Gaarka ah ee u madaxa ka yahay Col. Cabdullahi Yusuf Axmed.
Mudane Cabdullahi Caddow oo u waramay wakaaladda wararka Reuters ayaa si weyn uga hadlay muhimada ay nabadu u leedahay umada Soomaaliyeed oo ilaa haatan aan weli helin qaran ka taliya dalka.
Dr. Cabdullahi Caddow ayaa ugu baaqay Col. Cabdullaahi Yuusuf in uu xarun ka dhigto Muqdisho, isla markaan ku haboontahay inuu wada hadal la yeesho Gollaha barlamaanka Dowladiisa ee ay isagu fikirka isku khilaafsanyihiin. “ Ma jirto sabab uu Col. Cabdullaahi Yusuf Muqdisho uga baaqdsado, cadowgiisa ma joogaan, Muqdishana waa magaala madaxda Soomaaliya waxaana hubaa in shacabka Muqdisho diyaar u yihiin nabad in lagu soo dabaalo dalka iyada oon qoriga loo adeegsanin”.
Dr. Cabdullahi Axmed Caddow oo ah mudane si weyn dalka gudahiisa iyo dibadiisa looga yaqaan ayaa ahaa mudanihii kaalinta 2aad ka galay tartankii Madaxtinimada Soomaaliya mudadii doorashooyinkii shirarkii lagu qabtay Jabuuti ee lagu soo doortay dowladii Carte iyo tii Keynya, Nayrobi.
Dr. Cabdullaahi Axmed Caddow oo ah nin nabada jecel ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa "Hadii ay cidi qori caaradii wax ku noqon karto, waxaa weli xukunka dalka gacanta ku hayn lahaa rajiimkii hore".
Dr. Cabdullaahi Axmed Caddow oo ah siyaasi weyn oo horay u ahaan jiray Safiirka Soomaaliya u fadhiyay Washington, marna noqday wasiirka maaliyadda dowladii hore burburtay ayaa ka digay in shacabka Soomaaliyeed xoog loo adeegsado. Wuxuuna yiri “waxay Soomaalidu garowsatay in aaney cidna cid kale xoog ku muquunin Karin” waxaana haboon buu yiri “wax kastana waxaa in wada hadal lagu dhameeyo iyda on dhiig daadanin”.
Wareysiga Dr. Cabdullahi Axmed Cadow ayaa ku soo beegmay xaalada adag ee haatan Soomaaliya ku sugantahay, taas oo ah in aynan weli jirin dowlad Dhexe oo haatan shaqeyneyso, waddankuna laga yaabo in mar kale dagaallo ka qarxaan.